छिट्छिटै पिसाब लाग्छ ? पुवामाई टोल पुग्नुहोला नि ! - Nayabulanda.com
२९ असार २०७५, शुक्रबार १०:१२ 57 पटक हेरिएको
इलाम : तपाइँलाई यदि छिटो छिटो पिसाब लाग्ने बानी या रोग छ भने जस्तै इमर्जेन्सी काममा वा झुक्किएर पनि इलाम नगरपालिका ९ को पुवामाई टोल विकास संस्थाको क्षेत्रभित्र नपस्नु होला । त्यहाँ स्पष्टसँग सूचना गरिएको छ– टोल विकास संस्थाको क्षेत्र भरि पिसाब गर्न पाइँदैन भनेर ।
उनको भनाई अनुसार नगरपालिका कार्यालयले टोल विकास संस्थाहरूमा खुल्ला दिशापिसाब नगर्ने सन्देश सूचना बोर्डमा राख्न बजेटसहित जिम्मा दिएको बेला राखिएको उक्त बोर्डमा भूलबस पिसाब गर्नै नपाइने सन्देश परेको हो । ‘म आफुले त्यतिबेला हेरिरहिनँ । नगरपालिकाले छिटो गर भनेर हतार लगायो । हतारहतारमै संस्थाका अरु साथीहरूले काम गर्दा त्यस्तो भूल भएछ’, अध्यक्ष चौहानले भने । त्यो बोर्ड राखिएको एक वर्षभन्दा बढी भइसकेको छ । के यतिञ्जेल पिसाब गरेनन् त कसैले ? भन्ने प्रश्नमा उनले त्यस्तो नभएको र कसैलाई केही नगरिएको जवाफ दिए । किन बोर्डमात्रै राखियो त ? भन्ने प्रश्नमा चाहिँ उनले आपूm रुखमा चढेर झिक्न नसक्ने र साथीहरूले नभ्याएको भन्दै आज भोली नै आफुले त्यो बोर्ड झिक्न लगाउने प्रतिबद्धता ब्यक्त गरे । भाषा मिलाउन ख्याल नगर्दा बोर्डमा लेखिएको वाक्यले दिन खोजिएको सन्देश भन्दा फरक र गतल अर्थ लाग्ने सन्देश दिएको उनले स्वीकार गरे । चौहान सेवानिबृत्त शिक्षक हुन् । सन्दकपुर दैनिक पत्रिकामा यो खबर छापिएको छ